New TinyUmbrella 8.2.0.41 Beta Navoaka | Vaovao IPhone
Tamin'ny andro iray hafa dia namoaka ny vaovao momba ny fiverenan'i TinyUmbrella izahay, kilasika iray amin'ireo rindranasa "tsy ofisialy" ho an'ny iPhone sy iPad izay tamin'ny fotoana hafa dia nahasoa anay nametraka ilay kinova firmware tadiavinay. Na dia mbola ao anaty beta aza, ity kinova voalohany ity dia efa nampiasaina hamerenana ny SHSH sarobidy amin'ny fanantenana fa indray andro any dia ho sitrany indray ny sandany ary hanompo anay hametraka ny firmware tadiavinay. Izao vao natomboka kinova vaovao manamboatra bibikely ary manatsara ny lafiny sasany amin'ny TinyUmbrella.
Ity kinova vaovao ity, izay azo sintonina avy amin'ny tranonkala ofisialy ny fangatahana, ahitana ireto fanatsarana manaraka ireto:
Famantarana 32-bit sy 64-bit: TinyUmbrella sy iTunes dia tsy maintsy manana maritrano mitovy (32-bit na 64-bit). Raha sanatria hafa noho izany dia hampandre anao ny fampiharana mba hametraka ilay kinova marina. Raha tsy izany dia tsy ho afaka mamantatra ny fitaovanao.
Fanatsarana ny fahombiazana: nametraka olana sasany rehefa nanomboka ny fampiharana sy ny fikirakirana ireo rakitra izay efa namboarina.
Olana SHSH taloha: ny kinova SHSH taloha (kinovan'ny 3.x) dia tsy voamarik'i TinyUmbrella, izay namboarina tao amin'ity kinova vaovao ity.
Fanatsarana ny fifandraisana amin'ny mpizara TSS: hisorohana ny fifandraisana tsy ho hita ary voarara ny IP anay.
Asongadino ny fitaovana rehefa misafidy SHSH: ao amin'ny latabatra SHSH voatahiry, ny fisafidianana iray dia hampisongadina ilay fitaovana ampiarahiny.
Fanatsarana hafa sy fanamboarana bibikely.
Azo alaina ho an'ny Windows sy Mac OS X, na dia tsy manana antsipiriany bebe kokoa momba ny fampiasana inona aza izahay, dia manondro izany ny zava-drehetra tsy ho ela dia hisy ny rindranasa mamela antsika hamerina amin'ny laoniny ny fitaovanay amin'ireo SHSH ireo amin'ny kinova iray, na inona na inona sonian'ny Apple na tsia. Mandra-pahatongan'izany dia tsara kokoa ny misintona ny TinyUmbrella ary tehirizo ny SHSH amin'izay mety hitranga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Navoaka i Beta TinyUmbrella 8.2.0.41 vaovao
Misy kinova vaovaon'ny TinyUmbrella beta
Fampiharana karama izay azonao sintonina maimaim-poana (23 martsa 2015)